Paul's 1st Letter to the Corinthians – 2hove
musha / Bhaibheri / mutsamba / Paul's 1st Letter to the Corinthians
1:1 Paul, akadana sezvo mupostori waJesu Kristu nechido chaMwari; naSositeni, hama:
1:2 kuKereke yaMwari iri paKorinde, kune avo vatsvene muna Kristu Jesu, vakadanwa kuti vave vatsvene pamwe chete navose vari kushandisa zita raIshe wedu Jesu Kristu ari kunzvimbo dzose zvavo uye zvedu.
1:3 Nyasha norugare ngazvive nemi zvinobva kuna Mwari Baba vedu uye Ishe Jesu Kristu.
1:4 Ndinovonga Mwari wangu nguva dzose nekuda kwenyu, nekuda kwenyasha dzaMwari kuti kwakapiwa kwamuri Kristu Jesu.
1:5 By kuti nyasha, muzvinhu zvose, wava vakapfuma maari, shoko ose uye zivo zvose.
1:6 uye saka, uchapupu hwaKristu hwakasimbiswa mamuri.
1:7 Nenzira iyi, hapana ari kushayikwa kwamuri chero nyasha, sezvaunomirira kuratidzwa kwaIshe wedu Jesu Kristu.
1:8 Zvino, wo, kuchasimbisa iwe, kunyange kusvikira pakuguma, pasina mhosva, kusvikira zuva veMubatanidzwa kwaIshe wedu Jesu Kristu.
1:9 Mwari akatendeka. kubudikidza naye, wanga mukudyidzana kweMwanakomana wake, Jesu Kristu Ishe wedu.
1:10 uye saka, Ndinokukumbirai, hama, nezita raIshe wedu Jesu Kristu, kuti mumwe nomumwe wenyu ataure saizvozvo, uye kuti pasava kunogadzirisa makakatanwa pakati penyu. Saka dai iwe uve wakakwana, nemurangariro wakadaro uye pamwe chete nokutonga.
1:11 Nokuti zvave zvinoratidzwa kwandiri, pamusoro pako, hama dzangu, nevaya vane Chloes, kuti kune makakava pakati penyu.
1:12 Ndinoreva izvi nokuti mumwe nomumwe wenyu ari: "Zvechokwadi, Ini ndiri waPauro;"" Asi ini ndiri Apollo;"" Zvirokwazvo, Ini ndiri waKefasi;" naizvozvowo: "Ini ndiri waKristu."
1:13 Kristu ave rakakamurwa? Paul akanga pamuchinjikwa imwi? Makabhabhatidzwa muzita raPauro?
1:14 Ndinovonga Mwari kuti handina kubhabhatidza mumwe wenyu, kunze kwaKrispo naGayo,
1:15 zvimwe munhu kutaura kuti iwe zvakabhabhatidzwa muzita rangu.
1:16 Uye neniwo kubhabhatidzwa veimba Sitefana. Other pane izvi, Handisi kuyeuka kana ndakabhabhatidzazve dzavamwe.
1:17 Nokuti Kristu haana kundituma kuti ndinobhabhatidza, asi kuti kundoparidza: kwete kuburikidza uchenjeri hwamashoko, zvimwe muchinjikwa waKristu kuva chinhu.
1:18 Nokuti Shoko Cross zvechokwadi upenzi kuna vari kuparara. Asi kune avo vakaponeswa, ndiko, kwatiri, isimba raMwari.
1:19 Nokuti zvakanyorwa: "Ini vachaparara uchenjeri dzevakachenjera, uye ndichaita kuramba kunzwisisa kwevazivi. "
1:20 avakachenjera kupi? Apo vanyori ndivo? Varipi vanotsvaka chokwadi venyika ino? Mwari haana kuita uchenjeri hwenyika ino oupenzi?
1:21 Nokuti nyika haina kuziva Mwari kuburikidza nouchenjeri, uye saka, muuchenjeri hwaMwari, zvakafadza Mwari kuita ruponeso vatendi, kubudikidza neupenzi redu rokuparidza.
1:22 Nokuti vaJudha vanokumbira zviratidzo, nevaGiriki vanotsvaka uchenjeri.
1:23 Asi isu tiri kuparidza Kristu pamuchinjikwa. zvechokwadi, kuvaJudha, ichi chinhu wokupomera, uye nokuvaHedheni, ichi upenzi.
1:24 Asi kune vaya vakadanwa, VaJudha nevaGiriki, Kristu ndiye simba raMwari nouchenjeri hwaMwari.
1:25 Nokuti zviri upenzi kuna Mwari anonzi vakachenjera nevarume, uye icho simba kuna Mwari anonzi simba nevarume.
1:26 Saka chengetedza zvako rekuparidza, hama. Nokuti havazi vazhinji vakachenjera panyama, havazi vazhinji vane simba, havazi vazhinji vanokudzwa.
1:27 Asi Mwari akasarudza zveupenzi zvenyika, saka kuti anyadzise vakachenjera. Uye Mwari akasarudza zvisina simba zvenyika, saka kuti anyadzise simba.
1:28 Uye Mwari akasarudza ignoble uye anozvidzwa zvenyika, avo vari chinhu, kuti kuderedza kuna hapana vane chinhu.
1:29 Naizvozvo, chinhu nenyama ingazvikudza pamberi pake.
1:30 Asi imi muri maari muna Kristu Jesu, akaitwa naMwari kuti ave nouchenjeri hwedu uye kururamisira uye vatsvene, nerudzikinuro.
1:31 uye saka, saizvozvo, zvakanyorwa: "Ani naani runako, ingazvikudza Ishe. "
2:1 uye saka, hama, pandakauya kwamuri, muchizivisa uchapupu hwaKristu, Handina kuuya mashoko vakakwidziridzwa kana uchenjeri chakakwirira.
2:2 Nokuti handina pachangu kuziva chinhu pakati penyu, kunze kwaJesu Kristu, uye vakamuroverera pamuchinjikwa.
2:3 Uye ndakanga ndinemwi muutera, uye vachitya, uye nokudedera kukuru.
2:4 Uye mashoko angu uye kuparidza havana mashoko okunyengetedza ouchenjeri hwevanhu, asi zvaiva kuratidzwa kwoMweya uye kunaka,
2:5 kuti rutendo rwenyu rwurege kuva kunobva uchenjeri hwevanhu, asi pamusoro kunaka kwaMwari.
2:6 ikozvino, tinotaura tiri uchenjeri pakati hwakakwana, asi zvirokwazvo, ichi hahusi uchenjeri hwenyika ino, kana kuti vatungamiri venyika ino, izvo zvinofanira kuderedzwa pasina.
2:7 pachinzvimbo, tinotaura uchenjeri hwaMwari muchakavanzika iyo chakavigwa, izvo Mwari kare vasati zera iri kubwinya kwedu,
2:8 chinhu kuti hapana vatungamiriri venyika ino wakaziva. Nokuti dai vakanga kuriziva, chavaisazombofa pamuchinjikwa Ishe wekubwinya.
2:9 Asi ichi ndicho sezvarakanga zvichinzi: "Ziso harina kuona, uye nzeve haina kunzwa, uyewo izvozvo kupinda mumoyo wemunhu, zvinhu zvakagadzirirwa naMwari vaya vanomuda. "
2:10 Asi Mwari akaratidza izvi kuna isu kubudikidza neMweya wake. Nekuti Mweya unonzvera zvinhu zvose, kunyange zvinhu zvakadzika zvaMwari.
2:11 Uye ndiani anogona kuziva zvinhu murume, kunze mweya uri mukati kuti murume? saizvozvo, hapana anoziva zvinhu zvaMwari, kunze Mweya waMwari.
2:12 Asi isu hatina kugamuchira mweya wenyika ino, asi Mweya unobva kuna Mwari, kuitira kuti vanzwisise zvinhu zvakapiwa kwatiri naMwari.
2:13 Uye tiri kutaura zvinhu izvi, kwete namashoko ouchenjeri hwavanhu vakadzidza, asi mukudzidzisa noMweya, kuunza zvinhu zvokunamata pamwe chete zvinhu zvokunamata.
2:14 Asi mhuka hunhu wemunhu havana hanya izvi zvinhu zveMweya waMwari. Nokuti upenzi kwaari, uye haagoni kunzwisisa izvozvo, nekuti zvinofanira zvinoongororwa mumudzimu.
2:15 Asi nekunamata munhu anotonga zvinhu zvose, uye iye amene anogona vachatongwa hakuna munhu.
2:16 Nekuti ndiani wakaziva fungwa yaIshe, saka kuti amurayiridze? Asi isu tine pfungwa dzaKristu.
3:1 uye saka, hama, Ndakanga ndisingakwanisi kutaura nemi savanhu kana kune avo veMweya, asi sezvo kana kune zvenyama. Nokuti imi muri sevacheche Kristu.
3:2 Ndakakupai mukaka, kwete zvokudya zvikukutu. Nokuti vakanga vasati kugona. uye zvirokwazvo, kunyange ikozvino, hausi kukwanisa; nokuti muchiri venyama.
3:3 Uye sezvo pachine godo negakava pakati penyu, imwi hamuzi venyama, uye hamusi kufamba maererano nomunhu?
3:4 Nokuti kana munhu anoti, "Zvechokwadi, Ini ndiri waPauro,"Apo mumwe anodaro, "Ini ndiri Apollo,"Ndimi here varume? Asi chii chinonzi Apollo, uye chii Paul?
3:5 Tiri chete vashumiri kwaari watenda maari, sezvakataurwa naJehovha ipiwe nomumwe wenyu.
3:6 I akadyara, Apollo akadiridza, asi Mwari akapa kukura.
3:7 uye saka, unodzvara, kana unodiridza, chinhu, asi Mwari chete, uyo anotipa kukura.
3:8 Zvino iye anosima, uye unodiridza, tiri umwe. Asi umwe neumwe uchagamuchira mubairo wake zvakakodzera, maererano nemabasa ake.
3:9 Nokuti tiri vabatsiri vaMwari. Imi muri Mwari kurimwa; muri Mwari kuvaka.
3:10 Maererano nenyasha dzaMwari, unopiwa kwandiri, Ini nheyo akafanana akachenjera akitekiti. Asi umwe unovaka pamusoro payo. Naizvozvo, munhu mumwe nomumwe ngwarira sei anovaka pamusoro payo.
3:11 Nokuti hakuna munhu angagona kuisa imwe nheyo chero, panzvimbo iyo yakarongwa, inova Kristu Jesu.
3:12 Asi kana munhu achivaka pamusoro penheyo iyi, kana goridhe, sirivha, mabwe anokosha, danda, ipapo, kana mashanga,
3:13 basa romumwe nomumwe anofanira pachena. Nokuti zuva raJehovha agozvizivisa, nokuti acharatidzwa nemoto. Uye moto ichi ichaedza nomumwe basa, kuti rakadini iri.
3:14 Kana munhu basa, raakavaka pamusoro payo, masaridzwa, ipapo iye achagamuchira mubayiro.
3:15 Kana basa romunhu ukapisa, achaita kurasikirwa kwayo, asi iye amene achiri kuponeswa, asi chete sezvo kuburikidza moto.
3:16 Hamuzivi kuti imwi muri temberi yaMwari, uye kuti Mweya waMwari anogara mukati mako?
3:17 Asi kana munhu anoputsa yaMwari, Mwari achamuparadza. Nokuti temberi yaMwari itsvene, uye imi muri kuti Temple.
3:18 Ngakurege kuva nomunhu pachake. Kana munhu pakati penyu sokuti kuva vakachenjera pazera iri, ngaave benzi, kuti ave akachenjera zvechokwadi.
3:19 Nokuti uchenjeri hwenyika ino upenzi kuna Mwari. Uye saka zvakanyorwa: "Ini achabatwa vakachenjera avo astuteness."
3:20 uye zvakare: "Ishe anoziva ndangariro dzevakachenjera, kuti hadzina maturo. "
3:21 uye saka, ngakurege kuva neunozvikudza nevanhu.
3:22 Nokuti zvose ndeyako: kana Pauro, kana Apollo, kana Kefasi, kana nyika, kana upenyu, kana rufu, kana zvazvino, kana ramangwana. Ehe, zvose ndezvenyu.
3:23 Asi imi muri vaKristu, uye Kristu ndewaMwari.
4:1 zvakanyatsonakanaka, regai munhu funga kuti tive vashumiri Kristu uye vashandi vezvakavanzika zvaMwari.
4:2 Pano uye ikozvino, kwakanyorwa kunodiwa vashandi kuti mumwe nomumwe kuwanikwe akatendeka.
4:3 Asi ndirini, chinhu chiduku chakadai ichizotongwa nemwi, kana zera vanhu. Uye kana ini pachangu.
4:4 Nokuti handina chinhu hana yangu. Asi ini handina takarurama ichi. Nokuti Jehovha ndiye anonditonga.
4:5 uye saka, usaridza kutonga pamberi nguva, kusvikira Jehovha anodzoka. Achaita kuvhenekera zvakavanzwa zvinhu rima, uye iye achaita kuti ucharatidza sarudzo mwoyo. Zvino mumwe nomumwe acharumbidzwa naMwari.
4:6 uye saka, hama, Ndakupayi zvinhu izvi pachangu uye muna Apollo, nokuda kwenyu, kuti mudzidze, kuburikidza nesu, kuti hapana anofanira inflated mumwe munhu uye mumwe, kwete rinopfuura zvichinzi.
4:7 Nokuti chii chinosiyanisa iwe kubva kuno mumwe? Uye chii chaunacho hamuna kugamuchira? Asi iwe kana achigamuchira, seiko kukudzwa iwe, sokunge imi vasina kurigamuchira?
4:8 saka, ikozvino hamuna wazadzwa, uye ikozvino iwe takaitwa akapfuma, sokunge kuti kutonga pasina isu? Asi ndinoda kuti imi vaizotonga, saka kuti isu, wo, titonge pamwe nemwi!
4:9 Nokuti ndinofunga kuti Mwari vatipa sezvo wokupedzisira vaApostora, sezvo avo vakananga rufu. Nokuti takaitwa kuva chiseko chenyika, uye nokuda Angels, uye vanhu.
4:10 Saka tiri mapenzi nekuda kwaKristu, asi imi muri achinzwisisa muna Kristu? Takaneta, asi imi muri simba? Muri vanokudzwa, asi isu tiri ignoble?
4:11 Kunyange kune chaizvo ichi awa, isu nzara nenyota, uye isu tiri kupfeka uye kakawanda kurohwa, uye isu tiri kutsiga.
4:12 Uye tinoshanda, tichishanda nemaoko edu pachedu. Tiri achicherwa, uye saka tinorumbidza. Tichitambura uye kutsungirira kutambudzwa.
4:13 Tiri vakatukwa, uye saka tinonyengetera. Tava marara ino, kufanana Gara zvose, kunyange kusvikira ikozvino.
4:14 Handisi kukunyorerai izvi kuti anyadzise iwe, asi kuti ndikurayirei, sezvo vanakomana vangu Mudikanwi.
4:15 Nokuti imi muve varayiridzi zvuru gumi muna Kristu, asi madzibaba kwete vakawanda. Nokuti muna Kristu Jesu, kuburikidza Gospel, Ndine baba imi.
4:16 saka, Ndinokukumbirai, Ivai vatevedzeri vangu, seni ndiri waKristu.
4:17 Nechikonzero ichi, Ndatuma Timoti kwamuri, iye mwanakomana wangu wandaida zvikuru, uye ndiani akatendeka muna She. Iye achakuyeuchidzai nzira dzangu, zviri muna Kristu Jesu, seni nezvandinodzidzisa kwose kwose, mukereke dzose.
4:18 Vamwe vava inflated vanofunga kuti handidi kudzokera kwamuri.
4:19 Asi ndichadzoka kwamuri nokukurumidza, kana Ishe achida. Uye ndichaita funga, kwete mashoko vaya inflated, asi simba.
4:20 Nokuti umambo hwaMwari hahusi namashoko, asi nemhaka.
4:21 Chii waizosarudzei? Ndinofanira kwamuri neshamhu, kana nerudo uye nomweya wounyoro?
5:1 Above zvimwe zvose, zvinonzi kutaurwa kuti pane ufeve pakati penyu, kunyange ufeve ose zvokuti haazi pakati pavahedheni, kuti mumwe vaizova mudzimai wababa vake.
5:2 Asi iwe inflated, uye hamuna pachinzvimbo makashungurudzwa, zvekuti iye wakaita ichi chinhu kuti kubviswa pakati penyu.
5:3 zvechokwadi, kunyange ndisipo mumuviri, Ndiripo mumudzimu. saka, I kare kutongwa, sokunge ndakanga vaivapo, iye wakaita ichi.
5:4 Muzita raIshe wedu Jesu Kristu, zvawave vakaungana nomudzimu wangu, nesimba raIshe wedu Jesu,
5:5 kuti unzi munhu akadai uyu kuna Satani, kuparadza nyama, kuti mweya uponeswe pazuva raIshe wedu Jesu Kristu.
5:6 Hazvina kunaka kuti kubwinya. Hamuzivi here kuti mbiriso shoma inosvibisa mukanyiwa wose?
5:7 Kubvisa mbiriso yekare, kuti muve chingwa chitsva, nokuti imi kuviriswa. For Kristu, redu rePasika, zvino immolated.
5:8 uye saka, ngatiregei Vanogutswa, kwete nembiriso yekare, kwete nembiriso yekuipa nekutadza, asi nechingwa chisina kuviriswa okutendeseka nechokwadi.
5:9 Sezvo zvandanyora kwamuri tsamba: "Regai kufambidzana nemhombwe,"
5:10 Zvechokwadi kwete nezvifeve ino, kana vanokara, kana makororo, kana varanda zvidhori. zvimwe, unofanira abve munyika ino.
5:11 Asi ikozvino ndakunyorerai kuti imi: havadyidzani munhu anonzi hama uye asi ari mhombwe, kana makaro, kana muranda zvidhori, kana mucheri, kana vakadhakwa, kana gororo. With munhu akadai, regai kunyange kutora zvokudya.
5:12 Nokuti chii chandingaita nditonge avo vari kunze? Asi regai kunyange imi pachenyu kutonga avo vari mukati?
5:13 Nokuti vaya vari kunze, Mwari achatonga. Asi tumai ichi chakaipa munhu kubva pachenyu.
6:1 Sei zvichikosha kuti mumwe wenyu, ndine nharo pamusoro mumwe, aizorega kutongwa pamberi yakaipa, uye akasamumhan'arira kuvatsvene?
6:2 Ko hamuzivi here kuti vatsvene kubvira pazera iri vanofanira kutonga? Uye kana nyika ichizotongwa nemwi, Hamuna kufanira, ndokubva, kutonga kunyange zviduku nyaya?
6:3 Hamuzivi kuti tichatonga vatumwa? Ndoda zvinhu zera rino?
6:4 saka, kana iwe une zvinhu kutonga pamusoro zera ichi, wadii gadzai vaya zvikuru anozvidzwa muKereke kuzotonga zvinhu!
6:5 Asi ndiri kutaura kuti ndikunyadzisei. Hakuna mumwe pakati penyu wakachenjera zvakakwana, kuti achakwanisa kutonga pakati pehama dzake?
6:6 pachinzvimbo, mukoma achikwikwidza pamusoro munin'ina mudare, uye izvi pamberi kutendeka!
6:7 Zvino zvirokwazvo ane mhosva pakati penyu, zvinopfuura zvose, kana uine dare mhosva mumwe. Unofanira kugamuchira kukuvara pachinzvimbo? Unofanira kutsungirira kuitwa chandakukanganisira pachinzvimbo?
6:8 Asi imi muri kuita kukuvadza uye kubirira, uye izvi hama!
6:9 Hamuzivi kuti yakaipa havangagari nhaka yeushe hwaMwari? Musatora kudzungaira kurasika. For zvifeve, kana varanda zvidhori, kana mhombwe,
6:10 kana mbodza, kana vanhurume vanorara nevarume, kana mbavha, kana nevachivi, kana vakadhakwa, kana vanochera vamwe, kana makororo vachagara nhaka yeushe hwaMwari.
6:11 Uye vamwe venyu sezvizvi. Asi makanzi absolved, asi makatsveneswa, asi iwe takarurama: zvose muzita raShe wedu Jesu Kristu uye noMweya waMwari wedu.
6:12 Zvose zvinotenderwa kwandiri, asi kwete zvose Zvakakunakirai. Zvose zvinotenderwa kwandiri, asi handidi inodzoserwa shure chiremera munhu.
6:13 Zvokudya ndezvedumbu, uye dumbu ndechokuti chikafu. Asi Mwari achaparadza zvose dumbu uye chikafu. Uye muviri hausi woufeve, asi Jehovha; uye Ishe ndewomuviri.
6:14 Zvirokwazvo, Mwari akamutsa Ishe, uye achatidzidzisa kumutsira nesimba rake.
6:15 Hamuzivi kuti miviri yenyu chikamu Kristu? Naizvozvo, Ndinofanira kutora chikamu Kristu uye kuti chikamu chifeve? Ngahurege kuva zvakadaro!
6:16 Uye hamuzivi here kuti uyo anobatanidzwa nechifeve anova muviri mumwe? "Nokuti maviri," akati, "Vachava nyama imwe."
6:17 Asi ani naani akabatanidzwa naShe mudzimu mumwe.
6:18 Tizai ufeve. chivi chose zvose kuti munhu anoita chinhu kunze kwemuviri, asi ani fornicates, anotadzira muviri wake.
6:19 Ko hamuzivi here kuti muviri wenyu itembere yoMweya Mutsvene, ndiani mauri, uyo wamakagamuchira kubva kuna Mwari, uye kuti hamusi venyu?
6:20 Nokuti imi vakatengwa nomutengo mukuru. Kudzai uye kutakura Mwari mumuviri wenyu.
7:1 Zvino maererano nezvinhu zvamakandinyorera kwandiri: Zvakanaka kuti munhu arege kubata mukadzi.
7:2 asi, nekuti ufeve, murume umwe neumwe ngaave nemukadzi wake pachake, uye ngaave mukadzi mumwe nomumwe ave nomurume wake.
7:3 Murume anofanira kuita izvi wake, uye mudzimai anofanira kuita saizvozvo kuna murume.
7:4 Hazvina mukadzi haana, asi murume, ane simba pamusoro muviri wake. asi, saizvozvowo nemiwo, haisi murume, asi mukadzi, ane simba pamusoro muviri wake.
7:5 saka, regai kukundikana kwako mitoro vakataurirana, asi zvichida Shekemi, kwenguva pfupi, kuti vabudise pachenyu kuti munamato. Ndokuzo, kudzokera pamwechete zvakare, zvimwe Satani anoedza achishandisa dzenyu kurega.
7:6 Asi ndiri kutaura izvi, kana somunhu zvakavanakira, kana somurairo.
7:7 Nokuti Ndingasarudza kana iwe zvose kufanana pachangu. Asi mumwe munhu ane zvakakodzera chipo chake kuna Mwari: mumwe nenzira iyi, imwezve saizvozvo.
7:8 Asi ndinoti kune vasina kuwana nechirikadzi: Zvakanaka kwavari, kana vaizoramba sezvo vari, sezvandinoita neniwo ndiri.
7:9 Asi kana vasingagoni kudzora pachavo, vanofanira kuwana. Nokuti zviri nani kuti kuroorwa, pane kupiswa.
7:10 Asi kune vaya akabatana rwemuchato, ndini ani unokuraira, asi Ishe: mudzimai hachisi kuparadzana nomurume wake.
7:11 Asi iye kana akakutsaurai kubva kwaari, iye anofanira kuramba asina kuroorwa, kana ayananiswe nemurume wake. Uye murume haafaniri kuramba mukadzi wake.
7:12 Achitaura zororo, Ndiri kutaura, kwete Ishe. Kana hama chero ipi zvayo iine mudzimai asingatendi, uye iye achida hake kugara naye, haafaniri kumuramba.
7:13 Uye kana mukadzi upi ane murume asingatendi, uye iye achida hake kugara naye, haafaniri kumuramba.
7:14 Nokuti murume asingatendi anoitwa mutsvene kubudikidza mudzimai anotenda, uye mukadzi asingatendi anoitwa mutsvene kubudikidza nomurume vanotenda. zvimwe, vana venyu vaizova vasina kuchena, asi pachinzvimbo zvitsvene.
7:15 Asi kana usingatendi achizviparadzanisa, ngaaende. Nokuti hama kana hanzvadzi haigoni pasi kuuranda nenzira iyi. Nokuti Mwari akatidana kuti tigare murugare.
7:16 Uye unoziva sei, mukadzi, hauzoponesi murume wako? Kana unoziva sei, murume, hauzoponesi mudzimai wako?
7:17 zvisinei, mumwe nomumwe vangafamba sezvo Jehovha akagovera kwaari, mumwe nomumwe sezvo Mwari akamudana. Saka itai nezvandinodzidzisa mumachechi ose.
7:18 Pane murume vakadzingiswa kudamwa? Ngaarege kufukidza kudzingiswa kwake. Pane murume kudzingiswa kudamwa? Ngaarege kudzingiswa.
7:19 Dzingiso hachizi chinhu, uye kusadzingiswa hakuzi chinhu; panongova kuchengetwa kwemirairo yaMwari.
7:20 Mumwe nomumwe kuramba chete kudanwa kuti akanzi.
7:21 Uri muranda uyo wakanzi? Musava nehanya nazvo. Asi kana imi nokusingaperi kukwanisa kusununguka, kuti kurishandisa.
7:22 Nokuti chero muranda uyo akadanwa naShe ari akasununguka muna She. Saizvozvowo, chero munhu akasununguka uyo wakanzi muranda muna Kristu.
7:23 Mave makatengwa nomutengo. Musava vachida kuva varanda vevanhu.
7:24 Brothers, munhu mumwe nomumwe, mune chero mamiriro akanzi, kuramba kuti mamiriro naMwari.
7:25 ikozvino, maererano nemhandara, Handina murairo waIshe. Asi ndinopa zano, somunhu uyo ​​akapiwa ngoni naShe, kuti ave akatendeka.
7:26 saka, I funga izvi kuti zvakanaka, nekuda kwematambudziko aripo: kuti zvakanakira munhu kuti ave vakadai sezvandiri.
7:27 Wakasunganidzwa nomudzimai? Usatsvaka kusunungurwa. Uri isina mudzimai? Usatsvaka mukadzi.
7:28 Asi kana iwe tora mukadzi, hauna kutadza. Uye kana mhandara vakawana, haina kutadza. kunyange zvakadaro, akadai izvi vachava nedambudziko panyama. Asi ini ndinoda kukutavirirai kubva ichi.
7:29 uye saka, ndizvo zvandinotaura, hama: Nguva ipfupi. Zvakasara zviri zvokuti: vane vakadzi vanofanira sokunge vaiva hapana;
7:30 uye vaya vanochema, sezvinonzi havana vachichema; uye vanofara, sokunge havana vachifara; uye vaya kutenga, sokunge vakatora hapana;
7:31 uye vaya vanoshandisa zvinhu ino, sokunge havana kushandisa navo. Nokuti mufananidzo ino ichapfuura.
7:32 Asi Ndingasarudza iwe kuva pasina kunetseka. Ani naani asina mudzimai kunetseka zvinhu zvaIshe, kuti sei kuti kufadza Mwari.
7:33 Asi ani naani ane mudzimai kunetseka pamusoro pezvinhu zvenyika, kuti sei kuti angafadza mukadzi wake. uye saka, akakamukana.
7:34 Zvino mukadzi asina kuroorwa, uye mhandara kufunga zvinhu zvaIshe, kuti iye ave mutsvene pamuviri nepamweya. Asi uyo wakawanikwa anofunga pamusoro pezvinhu zvenyika, kuti sei iye ungafadza murume.
7:35 Uyezve, Ndiri kutaura izvi kuti pachavo vabatsirwe, kwete kuti musungo pamusoro penyu, asi kune zvose zviri akatendeseka uye chero ringakupa kukwanisa kuva asingadziviswi, kuti vanamate Jehovha.
7:36 Asi kana munhu anofunga achizviona sokuti isingakudzwi, pamusoro mhandara ane akura zera, uye saka zvinofanira kuva, iye anogona kuita sezvo iye achida. Kana akamuwanisa, haana kutadza.
7:37 Asi kana iye akasarudza zvakasimba mumwoyo make, uye haana kuva mutoro, asi simba rake rwokusarudza, uye kana wakatonga ichi mumoyo make, kuti ngaarambe asina mhandara, anoita zvakanaka.
7:38 uye saka, uyo anobatana mhandara yake rwemuchato anoita zvakanaka, uye asingaunganidzi mubatane anoita wake nani.
7:39 Mukadzi akasungwa pasi pemurairo semazuva murume wake mupenyu. Asi kana murume wake afa, wasununguka. Iye anogona kuroora waanoda iye anoda, asi chete muna Ishe.
7:40 Asi iye achava Kwakaropafadzwa, kana iye anoramba ari mamiriro ichi, maererano nezano yangu. Uye ndinofunga kuti neni, wo, vane Mweya waMwari.
8:1 Zvino pamusoro zvinhu izvo zvakabayirwa kuzvifananidzo: tinoziva kuti tose tine ruzivo. Ruzivo runouyisa kuzvikudza, asi rudo runovaka.
8:2 Asi kana munhu anofunga pachake kuziva chinhu, iye haasati kuziva nenzira anofanira kuziva.
8:3 Nokuti kana munhu achida Mwari, anozivikanwa naye.
8:4 Asi zvokudya vari immolated nezvifananidzo, tinoziva kuti chifananidzo munyika chinhu, uye kuti hapana mumwe Mwari, kunze One.
8:5 Nokuti kunyange varipo vanonzi vamwari, kungava kudenga kana panyika, (kana munhu kunyange anofunga ikoko kuva vanamwari vakawanda uye madzishe mazhinji)
8:6 asi tinoziva kuti Mwari mumwe chete, Baba, kubva iye zvinhu zvose, uye maari tiri, uye mumwe Ishe Jesu Kristu, uyo zvinhu zvose, uye uyo tiri.
8:7 Asi ruzivo haisi wose. Vamwe vanhu, kunyange ikozvino, pamwe mvumo chifananidzo, kudya chii chave chifananidzo. Uye hana yavo, kuva ndonda, anova yakasvibiswa.
8:8 Asi chikafu hachingatiswededzi kuna Mwari. Nokuti kana tiri kudya, hatizofaniri zvakawanda, uye kana tisina kudya, hatizofaniri zvishoma.
8:9 Asi chenjerera kuti rusununguko rwenyu ave kukonzera chivi kune vaya vasina kusimba.
8:10 Nokuti kana munhu anoona munhu nokuziva akagara pasi kuti adye zvidhori, havazodyari hana yake, kuva ndonda, kushingiswa adye izvo zvakabayirwa kuzvifananidzo?
8:11 Uye anofanira kuva mukoma ndonda ichaparara nokuziva kwako, kunyange Kristu akafira iye?
8:12 Saka kana ukatadza saizvozvo pamusoro hama, uye iwe zvakaipa hana dzavo kusimba, ipapo munotadzira Kristu.
8:13 Nokuda kwaizvozvi, kana chikafu anotungamirira hama yangu inganditadzira, Handingatongokangamwi kudya nyama, ndirege vanotungamira hanzvadzi yangu inganditadzira.
9:1 Handizi wakasununguka? Handisi mupositori? Handina kuona Kristu Jesu Ishe wedu? Hausi basa rangu muna She?
9:2 Uye kana ini ndisiri mupostori kuna vamwe, asi zvakadaro ndiri kwamuri. Nokuti imi ndimi chisimbiso choupostori hwangu muna She.
9:3 Kuzvidavirira kwangu nevaya kundibvunza uyu:
9:4 Hatina simba adye uye anwe?
9:5 Hatina simba kufamba famba nomukadzi ari hanzvadzi, sezvinoita vamwe vaApostora, uye hama dzaIshe, uye naKefasi?
9:6 Kana chete neni naBhanabhasi vasina simba kuita saizvozvi?
9:7 Ndianiko akamboshumira somurwi uye akabhadhara yake stipend? Ndiani anodyara munda wemizambiringa akasadya kubva zvibereko zvayo? Ndiani mafuro makwai uye asingauyi kunwa kubva mukaka wemakwai?
9:8 Ndiri kutaura zvinhu izvi maererano nomunhu? Ko murairo here kutaura izvi?
9:9 Nokuti zvakanyorwa mumurayiro waMozisi: "Hamufaniri kusunga muromo nzombe, painenge ichipura zviyo. "Mwari pano hanya nenzombe?
9:10 Kana ari kutaura izvi, chaizvo, nokuda kwedu? Izvi zvakanyorwa zvakananga kwatiri, nekuti iye anorima, anofanira kurima mutariro, uye neunopura, wo, mutariro kugamuchira zvibereko.
9:11 Kana isu takadyara zvinhu zvomweya pakati penyu, zvichikosha kana isu nokukohwa zvinhu zvenyu zvenyika?
9:12 Kana vamwe vari vagovani ichi simba pamusoro penyu, nei isu kwete zvikuru akanzi? Asi hatina kushandisa simba iri. pachinzvimbo, tinoregera zvinhu zvose, tirege kupa kumbovhiringidza Evhangeri yaKristu.
9:13 Hamuzivi here kuti avo vanoshumira panzvimbo tsvene kudya zvinhu nzvimbo tsvene, uye kuti avo vanoshumira paaritari uyewo havagovani nearitari?
9:14 saka, wo, Ishe wakaraira kuti avo vanoparidza evhangeri, vararame neevhangeri.
9:15 Asi ini handina kushandisa chimwe chezvinhu izvi. Uye handina kunyora kuitira kuti izvi zviitwe kwandiri. Nekuti zviri nani kwandiri kuti ndife, pane kuti munhu zviri kukudzwa kwangu.
9:16 Nokuti kana ndichiparidza vhangeri, hazvina kukudzwa kwandiri. Nokuda zvandinovimbisa yakarongwa pamusoro pangu. Uye nhamo ini, kana ndisingaparidzi kuparidza Evhangeri.
9:17 Nokuti kana ndinoita izvi nokuzvidira, Ndine mubairo. Asi kana ini izvi nyongoroka, kutsigisa unozvipiwa ini.
9:18 uye chii, ndokubva, yaizova mubayiro wangu? saka, kana Evhangeri, Ndirege kukupai Gospel vasingadyi, kuti ndirege Usareva simba rangu muna Gospel.
9:19 Nokuti kana ndichiri akasununguka murume vose, Ndakazviitira muranda zvose, kuti ndiwane zvikuru.
9:20 uye saka, kuvaJudha, Ndakava somuJudha, kuti ndiwane vaJudha.
9:21 Kune vaya vari pasi pomutemo, Ndakava somunhu kana ndaiva pasi pemurairo, (kunyange ndakanga kwete pasi pemurairo) kuti ndiwane vaya vari pasi pomutemo. Vakanga vasina mutemo, Ndakava somunhu kana ndaiva pasina murairo, (kunyange ndakanga kwete pasina mutemo waMwari, ari mumutemo waKristu) kuti ndiwane vaya vasina murayiro.
9:22 Kuna vasina simba, Ndakava simba, kuti ndiwane vasina simba. To zvose, Ndakava zvose, saka kuti ndiponese zvose.
9:23 Uye ndinoita zvose nokuda Vhangeri, saka kuti ndive wayo mudiwa.
9:24 Hamuzivi kuti, vaya vanomhanya munhangemutange, vose, zvechokwadi, muri vamhanyi, asi chete mumwe inowana mubayiro. Saizvozvowo, unofanira kumhanya, kuti kuzadzisa.
9:25 Uye uyo achikwikwidza mumakwikwi abstains kubva zvose. Uye vanoita izvi, ehe saizvozvo, kuitira kuti vawane korona inoora. Asi isu kuita izvi, kuitira kuti kubudirira chii isingaori.
9:26 Uye saka I kumhanya, asi kwete nechokwadi. Uye saka I kurwisa, asi kwete flailing mudenga.
9:27 pachinzvimbo, I kakapetwa muviri wangu, kuitira kuti Redirect kuva muuranda. zvimwe, Ndingadai kuparidzira vamwe, asi kuva pachangu adzingwa.
10:1 Nokuti handidi kuti musaziva, hama, kuti madzibaba edu ose akanga ari pasi pegore, uye vose ndokuyambuka gungwa.
10:2 Zvino Moses, vose vakabhabhatidzwa, mugore nomugungwa.
10:3 Zvino vose vakadya zvokudya zvimwe zvoMweya.
10:4 Uye vose vakanwa zvokunwa zvimwe zvomweya. uye saka, Ivo vose vakanga vachinwa padombo romudzimu kutsvaka kuwana navo; uye dombo iri raiva Kristu.
10:5 Asi vazhinji vavo, Mwari haana unofadzwa. Nokuti vakanga vauraya mugwenga.
10:6 Zvino izvi zvakaitwa muenzaniso kwatiri, kuti tive Usachiva zvinhu zvakaipa, chete sezvavaida.
10:7 uye saka, haufaniri kutora chikamu zvidhori, sevamwe vavo vakaita, sezvakanga zvakanyorwa: "Vanhu vakagara pasi kuti vadye nokunwa, uye ipapo vasimuka kuti varaidza pachavo. "
10:8 Uye ngatirege kuita upomhwe, sevamwe vavo vakanyepa, uye saka zviuru makumi maviri nezvitatu yakawira zuva rimwe.
10:9 Uye ngatirege kuidza Kristu, sevamwe vavowo, uye saka vakaparadzwa nenyoka.
10:10 Uye haufaniri kugunun'una, sevamwe vavo vakagunun'una, uye saka vakaparadzwa nemuparadzi.
10:11 Zvino zvose izvi zvakaitika kwavari muenzaniso, uye saka zvakanyorwa kuti kururamiswa kwedu, nekuti kwokupedzisira zera rawa pamusoro pedu.
10:12 uye saka, ani anofunga pachake kuti akamira, ngaave kungwarira kuwa.
10:13 Muedzo vanofanira kumubata iwe, kunze kwevanhu. Nokuti Mwari akatendeka, uye iye Haazobvumiri kuti kupfuura kwaniso yako. pachinzvimbo, iye achaita kuti pave Providence ake, kunyange panguva muedzo, kuti mukwanise kuutakura.
10:14 Nokuda kwaizvozvi, vakawanda mudiwa wangu, tizai kunamata zvifananidzo.
10:15 Sezvo ndiri kutaura kune vakachenjera, kutonga zvandinotaura pachenyu.
10:16 The mukombe kukomborera watinoropafadza, hachirevi kugoverana muRopa Kristu? Nechingwa chatinomedura, hachirevi kugoverana Mutumbi raShe?
10:17 Kuburikidza chingwa chimwe, isu, kunyange vazhinji, tiri muviri umwe: isu tose vagovani chingwa chimwe.
10:18 Funga Israel, panyama. Ko, avo vanodya kubva zvibayiro vanodyidzana nearitari?
10:19 Chii chinotevera? Ndinofanira kutaura kuti chii chiri immolated kuzvifananidzo chinhu? Kana kuti chifananidzo chinhu?
10:20 Asi zvinhu vahedheni kubayira, ivo kubayira madhimoni, uye kwete kuna Mwari. Uye handidi kuti muve vagovani nemadhimoni.
10:21 Hamugoni kunwa mukombe waIshe, uye mukapu yemadhimoni. Haugoni kuva vagoverani patafura yaShe, uye vagovani patafura yemadhimoni.
10:22 Kana tinofanira mukombe waIshe negodo? Takasimba kupfuura iye? Zvose zvinotenderwa kwandiri, asi kwete zvose Zvakakunakirai.
10:23 Zvose zvinotenderwa kwandiri, asi kwete zvose zviri musimbiswe.
10:24 Kusava neunozvitsvakira pachake, asi vamwe.
10:25 Zvose zvinotengeswa pamusika wenyama, mudye, pasina mibvunzo nekuda kwehana.
10:26 "The zvenyika nokuzara kwayo zvose She."
10:27 Kana wakokwa chero vasingatendi, uye muchida kuenda, mudye zvose zvinoiswa pamberi penyu, pasina mibvunzo nekuda kwehana.
10:28 Asi kana munhu anoti, "Izvi zvakabayirwa kuzvifananidzo,"Rega kudya, nokuda kwaiye wakuratidzai, uye nekuda kwehana.
10:29 Asi ndiri kureva hana mumwe munhu, kwete neako. Nokuti nei yangu rusununguko ichizotongwa hana mumwe?
10:30 Kana ini ndichidya nokuonga, ko ini achicherwa nokuda chandinovonga?
10:31 saka, kunyange muchidya kana kumwa, kana chero zvimwe unogona kuita, itai zvose kuti Mwari akudzwe.
10:32 Kuva pasina mhosva kurutivi vaJudha, nokurutivi vahedheni, uye kurutivi Church yaMwari,
10:33 sezvandinoita neniwo, muzvinhu zvose, Ndapota vose, kwete kutsvaka zvakanakira ini, asi zvakanakira vamwe vazhinji, kuti vaponeswe.
11:1 Ivai vateveri vangu, seniwo ndiri waKristu.
11:2 Zvino ndinokurumbidzai, hama, nekuti iwe uri Ndirangarirei zvose, saizvozvo kuti kuomerera kune dzangu zvenyu sezvo ini akavaisa pasi iwe.
11:3 Saka ndinoda kuti muzive kuti musoro wemurume umwe neumwe ndiKristu. Asi musoro womukadzi murume. Asi zvechokwadi, musoro waKristu ndiye Mwari.
11:4 Murume mumwe nomumwe anonyengetera kana kuprofita musoro wake wakafukidzwa, anoninipisa musoro wake.
11:5 Asi mukadzi umwe neumwe unonyengetera kana kuporofita musoro wake asina akafukidza anoninipisa musoro wake. Nokuti zvakafanana kana musoro wake nokuveurwa.
11:6 Saka kana mukadzi haazi yakafukidzwa, regai vhudzi ngavarove. Zvirokwazvo ipapo, kana chinhu chinonyadzisa kuti mukadzi agerwe kunge, kana kuti murume nokuveurwa musoro, ipapo anofanira kufukidza musoro wake.
11:7 zvechokwadi, murume haafaniri kufukidza musoro wake, nokuti ndiye mufananidzo nokubwinya kwaMwari. Asi mukadzi kubwinya kwomurume.
11:8 Nokuti murume haabvi kumukadzi, asi mukadzi ndiye murume.
11:9 uye zvirokwazvo, murume haana kusikirwa mukadzi, asi mukadzi akasikirwa murume.
11:10 saka, mukadzi anofanira kuva nechiratidzo chesimba pamusoro wake, nokuda Angels.
11:11 Asi zvechokwadi, murume haana kurarama pasina mukadzi, kana kuti mukadzi kuvapo pasina murume, muna Ishe.
11:12 Nokuti mukadzi sezvo akavapo kubva kumunhu, saizvozvowo munhu zviripo kubudikidza mukadzi. Asi zvinhu zvose zvinobva kuna Mwari.
11:13 Zvienzanisei imwi. Zvakakodzera here kuti mukadzi anyengetere kuna Mwari asina kufukidzwa?
11:14 Kunyange chisikigo pachake kukudzidzisa kuti, chaizvo, kana murume rinokura bvudzi rake refu, chinhu zvinonyadzisa kwaari?
11:15 Asi zvechokwadi, kana mukadzi rinokura vhudzi refu, rukudzo kwaari, nekuti vhudzi rakapiwa kwaari chive chifukidzo.
11:16 Asi kana munhu ane pfungwa kuva negakava, isu hatina tsika yakadaro, uyewo Chechi yaMwari.
11:17 Zvino ini vanoyambira iwe, pasina vachirumbidza, nezvazvo: kuti iwe vaungane pamwe chete, uye kwete kuti nani, asi nokuti kuipa.
11:18 Kutanga kwazvose, chaizvo, Ndinonzwa kuti kana iwe vakaungana mukereke, pane kunogadzirisa makakatanwa pakati penyu. Uye ndinotenda ichi, muchidimbu.
11:19 Nekuti kupatsanuka kunofanira kuva dzidziso dzakatsauka, kuitira kuti vaya vaedzwa vaonekwe pakati penyu.
11:20 uye saka, kana iwe vaungane pamwe chete, hakuchina kuti kudya chirayiro chaIshe.
11:21 Nokuti mumwe nomumwe pakutanga anotora chirayiro chake kudya. Uye somugumisiro, mumwe munhu ane nzara, nepo mumwewo vakadhakwa.
11:22 Ko hamuna dzimba, kwamungadyira nokunwira? Kana kuti une kuzvidzwa zvakadai Chechi yaMwari kuti mungadai mukanganise avo vasina kuzvidzwa kwakadaro? Chii ndikati kwauri? Ndichatiiko kwamuri? Handisi vachikurumbidzai izvi.
11:23 Nekuti ini ndakagamuchira kuna Ishe chii handina akaponesawo kwamuri: kuti Ishe Jesu, nomusi iwoyo usiku kuti akanga mumaoko, akatora chingwa,
11:24 uye muchivonga, akachimedura, akati: "Torai mudye. Uyu ndiwo muviri wangu, izvo muchapiwa iwe. Itai izvi muchindirangarira. "
11:25 Saizvozvowo wo, mukombe, pashure adya chisvusvuro, vachiti: "Mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Ita izvi, nguva dzose kana muchiunwa, muchindirangarira. "
11:26 Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe, kusvikira iye anodzokera.
11:27 uye saka, ani naani anodya chingwa ichi, nokunwa mukombe waShe, zvisakafanira, uchava nemhosva yemuviri neropa raIshe.
11:28 Asi regai munhu kuzviongorora, uye, nenzira iyi, ngaadye kubva chingwa, uye kunwira mukapu kuti.
11:29 Nokuti ani naani anodya nokunwa zvisakafanira, anodya nokunwa mutongo pamusoro pake, zvaasingatsauri kuti muviri waIshe.
11:30 Semagumo, vazhinji vasina simba uye vachirwara pakati penyu, uye vazhinji vavete.
11:31 Asi kana isu pachedu vakanga zvaasingatsauri, ipapo zvirokwazvo isu hatizaitongwa.
11:32 Asi kana tichitongwa, tiri achitsiurwa Ishe, saka kuti tirege kuzoraswa pamwe chete nenyika ino.
11:33 uye saka, hama dzangu, kana iwe kuungana pamwe chete kuti mudye, ngadziteerere mumwe nomumwe.
11:34 Kana munhu aine nzara, ngaadye kumba, kuti murege vakaungana kuna mutongo. Mamwe, Ndicharimisa muhurongwa pandinosvika.
12:1 Zvino maererano nezvipo zveMweya, Handidi kuti musaziva, hama.
12:2 Munoziva kuti pamaiva vahedheni, iwe pedyo zvifananidzo mbeveve, kuita muchitungamirirwa kuita.
12:3 Nokuda kwaizvozvi, Ndinoda kuti muzive kuti hakuna munhu anotaura noMweya waMwari anotaura kutukwa pamusoro paJesu. Uye hakuna unogona kutaura kuti Jesu ndiye Ishe, asi Mweya Mutsvene.
12:4 Zvirokwazvo, pane siyana Nyasha dzemutendi, asi Mweya ndeumwe.
12:5 Uye kune shumiro dzakasiyana, asi Ishe mumwe chete.
12:6 Uye pane mabasa akasiyana siyana, asi Mwari mumwe chete, uyo anoshanda zvose wose.
12:7 zvisinei, kuratidzwa kwoMweya anopiwa mumwe nomumwe akananga chii kunobatsira.
12:8 zvechokwadi, kune mumwe, kuburikidza neMweya, anopiwa huchenjeri; asi kune mumwe, aaisitaura Spirit, mashoko ezivo;
12:9 kune mumwe, muMweya, kutenda; kune mumwe, muMweya mumwe, chipo chokuporesa;
12:10 kune mumwe, zvishamiso; kune mumwe, uprofita; kune mumwe, kunzwisisa nemidzimu; kune mumwe, yakasiyana siyana mumitauro; kune mumwe, kududzirwa mashoko.
12:11 Asi mumwe chete neMweya iwoyu zvose izvi, kupa kune mumwe nomumwe maererano nezvaanoda.
12:12 Nokuti muviri sezvo ari mumwe, asi une nhengo dzakawanda, saka zvose nhengo dzomuviri, kunyange zviri zvizhinji, tiri chete muviri mumwe. Saizvozvowo Kristu.
12:13 uye zvirokwazvo, noMweya mumwe, isu tose takabhabhatidzirwa mumuviri umwe, kana vaJudha kana vaGiriki, kana muranda kana akasununguka. Uye isu tose vakanwa muMweya mumwe.
12:14 Nokuti muviri, wo, haasi chikamu chimwe, asi vazhinji.
12:15 Kana rutsoka vaifanira kutaura, "Nokuti handizi ruoko, Handisi wemuviri,"Dai ipapo haana kuva muviri?
12:16 Uye kana nzeve vaifanira kutaura, "Nokuti handisi ziso, Handisi wemuviri,"Dai ipapo haana kuva muviri?
12:17 Kana muviri wose raiva ziso, sei kuti izvozvo kunzwa? Kana wose waiva kunzwa, sei kuti izvozvo munhuwi?
12:18 asi pachinzvimbo, Mwari akaisa nhengo, mumwe nomumwe wavo, mumuviri, sezvaanenge ada.
12:19 Saka kana vaiva zvose chikamu chimwe, sei kuti kuva muviri?
12:20 asi pachinzvimbo, kune mitezo mizhinji, chaizvo, asi muviri umwe.
12:21 Uye ziso harigoni kuti kuruoko, "Handina chikonzero mabasa ako." Uye zvakare, musoro haungati kutsoka, "Imi muri hakubatsiri kwandiri."
12:22 Saizvozvo, saka zvikuru zvakakodzera marupande avo dzomuviri dzinoita sedzisina simba.
12:23 Uye kunyange isu funga zvimwe zvikamu muviri kuva zvishoma vanokudzwa, tinokomberedza idzodzi idzi noruremekedzo rukuru, uye saka, avo mitezo zviri zvishoma zvakanaka kuguma kukwira noruremekedzo rukuru.
12:24 zvisinei, kwedu zvakanaka nhengo havatsvaki yakadaro, sezvo Mwari wakabatanidza muviri pamwe, kuparadzira rukudzo rukuru kune iyo ine kudiwa,
12:25 kuti pangava pasina schism mumuviri, asi pachinzvimbo mativi pachavo kuti zvichengetedze mumwe.
12:26 uye saka, kana mutezo mumwe uchitambudzika chinhu, zvose kumativi inotambudzika pamwe nawo. kana, kana mutezo mumwe anowana kubwinya, zvose kumativi inofara pamwe nawo.
12:27 Zvino imi muri muviri waKristu, uye zvikamu zvakafanana chero chikamu.
12:28 uye zvirokwazvo, Mwari akagadza mumwe murayiro muKereke: vaApostora vokutanga, wechipiri Vaprofita, Teachers yechitatu, inotevera chishamiso-vashandi, uye zvadaro nyasha chokuporesa, kubatsira vamwe, hurumende, dzakasiyana siyana mumitauro, uye kududzirwa mashoko.
12:29 Ko vaApostora zvose? Ko Vaprofita vose? Ko Teachers zvose?
12:30 Vose vanoita zvishamiso? Vose vane nyasha chokuporesa? Itai zvose nendimi? Vose vanodudzira?
12:31 Asi shingairira charisms nani. Uye ini kukuzivisa munhu asi kupfuura nzira.
13:1 Kana ndaiva kutaura mutauro nevanhu, kana Angels, asi ndisina rudo, Ndingadai akafanana clanging bhero kana nokukoromoka ngwere.
13:2 Uye kana ndine chiporofita, uye dzidza ose chakavanzika, uye kuwana ruzivo zvose, uye nhaka kutenda zvose, zvokuti ndaikwanisa kunofambisa makomo, asi ndisina rudo, ipapo ndiri chinhu.
13:3 Uye kana ini ugovere zvangu zvose kuti ndidyise varombo, uye kana ndikapa muviri wangu kuti upiswe, asi ndisina rudo, rinopa ini hapana.
13:4 Charity anoshivirira, mutsa. Charity haadi godo, asingaiti zvinhu zvisizvo, haina inflated.
13:5 Charity hakusi chinzvimbo, haatsvaki woga, haina akatsamwisa, mano hapana chakaipa.
13:6 Charity harufariri zvakaipa, asi runofarira chokwadi.
13:7 Charity anotambura zvose, runotenda zvose, rune tariro pazvinhu, runotsungirira.
13:8 Charity harimborevi kubvaruka kure, kunyange kana uprofita zvichipfuura, kana mitauro kunoguma, kana ruzivo rinoparadzwa.
13:9 Nokuti tinoziva zvisakakwana chete, uye tinoprofita zvisakakwana chete.
13:10 Asi kana zvakakwana zvasvika, asi vasina paichapfuura.
13:11 Pandaiva mwana, Ndakataura somwana, Ndakanzwisisa somwana, Ndakafunga somwana. Asi kana ndava murume, Ini yekumbotsveta zvinhu mwana.
13:12 Ikozvino tinoona kuburikidza girazi darkly. Asi zvino isu vachaona chiso nechiso. Ikozvino ndinoziva muchidimbu, asi ipapo ndichaziva kuziva, sezvandiri kuvazivisa.
13:13 Asi ikozvino, izvi zvitatu mberi: kutenda, tarisiro, uye rudo. Uye chikuru chezvizvi rudo.
14:1 Tevera rudo. Shingairira zvinhu zvomudzimu, asi zvokuti chete kuti muporofite.
14:2 Nokuti ani naani anotaura nendimi, haatauri kuvanhu, asi kuna Mwari. Nokuti hapana munhu anonzwisisa. Asi neMweya, anotaura zvakavanzika.
14:3 Asi ani naani anoprofita anotaura kuvanhu kuvaka nekurudziro uye vakurudzirwe uye nyaradzo.
14:4 Uyo anotaura nendimi anozvisimbisa iye. Asi ani naani anoprofita anosimbisa Church.
14:5 Zvino ndinoda imi mose mutaure nendimi, asi zvikuru saka zviprofite. Nokuti Anoprofita mukuru kuna anotaura nendimi, kunze kwokunge zvichida achidudzira, saka kuti Chechi iwane kurudziro.
14:6 asi ikozvino, hama, kana ndikatambanudza kwamuri ndichitaura nendimi, sei kuti izvozvo kuchakubatsira, kana pane ndinotaura kwamuri pakuratidzwa, kana zivo, kana muuprofita, kana dzidziso?
14:7 Kunyange zvinhu zvisina mweya unogona mitinhimira, kana iri mhepo kana chine tambo. Asi kutoti kupa musiyano mukati machemero, sei zvichazivikanwa riri kubva nenyere uye riri kubva tambo?
14:8 Semuyenzaniso, kana hwamanda akaita manhenda kurira, ndiani ungazvigadzira kundorwa?
14:9 Saka nemwi vo, nokuti kana ukataura norurimi pachena pakutaura, sei zvichazivikanwa zvinotaurwa? Nokuti ipapo unenge uchitaura mumhepo.
14:10 Funga kuti kune marudzi mazhinji kwazvo endimi munyika ino, asi hapana pasina izwi.
14:11 saka, kana handisi kunzwisisa hunhu inzwi, ipapo ndichava somwana mutorwa uyo ndiri kutaura; uye iye ari kutaura achava akafanana mutorwa kwandiri.
14:12 Saka nemwi vo. Uye sezvo uri vanoshingairira pane zvokunamata, vanotsvaka pakuvaka Church, kuti muwedzere.
14:13 Nechikonzero ichi, wo, ani naani anotaura nendimi, ngaanzwe kunyengeterera dudziro.
14:14 saka, kana ndichinyengetera nendimi, mweya wangu unonyengetera, asi pfungwa dzangu pasina muchero.
14:15 Chii chinotevera? Ndinofanira nomweya, uye kunyengetera pamwe chete pfungwa. Ndinofanira nziyo dzokurumbidza nemweya, uye kudzokorora mapisarema nemurangariro.
14:16 zvimwe, kana Makakomborera chete nomudzimu, sei munhu, vachingotya nokusaziva, wedzera imwe "Ameni" kuti chikomborero wako? Nokuti haana kuziva zvauri kutaura.
14:17 In iyi, zvechokwadi, iwe unovonga zvakanaka, asi mumwe munhu haasimbiswi.
14:18 Ndinovonga Mwari wangu, kuti ndinotaura nendimi mose.
14:19 Asi muKereke, Ndinosarudza kutaura mashoko mashanu kubva mupfungwa dzangu, I kuitira kuti ndidzidzise vamwewo, Mashoko pane zviuru gumi nendimi.
14:20 Brothers, usaridza kuva pfungwa vana. pachinzvimbo, kusununguka kuipa sevacheche, asi ivai vakasimba mupfungwa dzenyu.
14:21 Zvakanyorwa mumurayiro: "Ndichataura kuvanhu ava nedzimwe ndimi uye nemimwe miromo, uye kunyange zvakadaro, havanganditendi ini kuteerera, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. "
14:22 uye saka, ndimi chiratidzo, kwete vatendi, asi kune vasingatendi; uye uprofita haigari vasingatendi, asi vatendi.
14:23 zvino kana, yose Church vaifanira kuungana pamwe chete, uye kana zvose zvaiva kutaura nendimi, uye ipapo vasingazivi kana vasingatendi vaiva kupinda, vakaramba kutaura kuti wanga penga?
14:24 Asi kana munhu wose anoprofita, uye uyo asingazivi kana vasingatendi anopinda, iye anogona kuva nechokwadi nazvo zvose, nekuti anonzwisisa zvose.
14:25 Zvakavanzika zvemoyo wake ipapo pachena. uye saka, richidonhera chake, angadai rumbidza Mwari, kuzivisa kuti zvechokwadi Mwari ari pakati penyu.
14:26 Chii chinotevera, hama? Kana iwe unganai, mumwe nomumwe wenyu ave pisarema, kana dzidziso, kana kuzarurirwa, kana mumwe mutauro, kana kududzira, asi regai zvose ngazviitwe kuvaka nekurudziro.
14:27 Kana munhu ari kutaura nendimi, regai vaviri chete kuva, kana pane vakawanda vatatu, uye zvadaro akavapindurawo, uye regai mumwe ngaadudzire.
14:28 Asi kana pasina munhu angadzidudzira, anofanira kunyarara mukereke, ipapo anogona kutaura kana ari oga naMwari.
14:29 Uye Vaporofita ngavataure, vaviri kana vatatu, uye vamwe ngavanzwisise.
14:30 asi zvino, kana chinhu chakaratidzwa mumwe agere, regai wokutanga kuva akanyarara.
14:31 Nokuti imi muri vanokwanisa kuprofita imwe panguva dzose, kuti vose vadzidze uye vose vakurudzirwe.
14:32 Nokuti Nemweya yevaporofita inozviisa pasi pevaporofita.
14:33 Uye Mwari haubvi kukakavadzana, asi werugare, sezvo neniwo kudzidzisa mumakereke dzose dzevatsvene.
14:34 Vakadzi vanofanira kuva akanyarara mumachechi. Nokuti havatenderwi kuti vataure; asi pachinzvimbo, vanofanira kuva pasi, sezvo murairo.
14:35 Uye kana vachida kudzidza chimwe chinhu, ngavabvunze varume vavo kumba. Nokuti zvinonyadzisa kuti mukadzi ataure mukereke.
14:36 Naizvozvo ikozvino, Ko Shoko raMwari kunobva kwamuri? Kana izvozvo kwamuri moga?
14:37 Kana munhu sokuti kuva muporofita kana pakunamata, anofanira kunzwisisa zvinhu zvandiri kukunyorerai, kuti zvinhu izvi zviri mirairo yaIshe.
14:38 Kana munhu asingadi kubvuma zvinhu izvi, haafaniri kuzivikanwa.
14:39 uye saka, hama, shingaira kuprofita, uye regai rambidza kutaura nendimi.
14:40 Asi ngakurege zvose zviitwe noruremekedzo uye maererano zvakakodzera kuti.
15:1 Uye saka roshamisa kwamuri, hama, Evhangeri ndakaparidza kwamuri, rwamakandida vagamuchirawo, uye yauri umire.
15:2 By Vhangeri, wo, imi vari kuponeswa, kana mukachengetedza kunzwisisa kuti ndakaparidza kwamuri, zvimwe uchitenda pasina.
15:3 Nokuti Ndakakugamuchidzai kwamuri, kutanga kwazvose, ndizvo zvandakakupaiwo: kuti Kristu akafira zvivi zvedu, maererano neMagwaro;
15:4 uye kuti akavigwa; uye kuti wakamutswa zvakare nezuva retatu, maererano neMagwaro;
15:5 uye kuti wakaonekwa nevanhu Kefasi, uye pashure paizvozvo achishandisa gumi.
15:6 Next akaonekwa nehama vanopfuura mazana mashanu panguva imwe, vazhinji vavo vachiripo, kusvikira nguva ino, kunyange zvazvo vamwe vavete.
15:7 Next, akaonekwa James, ipapo zvose vapositori.
15:8 Uye pakupedzisira, akaonekwa neniwo neni, sokunge ndakanga munhu akaberekwa panguva isiri nguva.
15:9 Nokuti ini ndiri muduku kuvapositori. Handina kunzi mupostori, nokuti ndakatambudza kereke yaMwari.
15:10 asi, nenyasha dzaMwari, Ini ndiri zvandiri. Uye nyasha dzake dziri kwandiri hadzina kuva chinhu, zvandakakuitirai ndakashanda kupfuura vose. Asi hazvisi I, asi nyasha dzaMwari mukati mangu.
15:11 Nokuti kana ini kana ivo: saka isu tinoparidza, uye saka makatenda.
15:12 Zvino kana Kristu ari kuparidzwa, kuti wakamutswa kuvakafa, sei kuti vamwe pakati penyu vanoreva sei kuti hakuna kumuka kwevakafa?
15:13 Nokuti kana hakuna kumuka kwevakafa, Saka Kristu haana kumutswa.
15:14 Uye kana Kristu asina kumutswa, naizvozvo kuparidza kwedu hakuna maturo, uye nokutenda kwenyu harwuna maturo.
15:15 ndokubva, wo, tinenge kuwanikwe zvapupu zvenhema zvaMwari, kunge nekuti taida vakapiwa uchapupu Mwari, achiti kuti akanga amutsa Kristu, kana asina akamusimudza, kana, chaizvo, vakafa vasingamutswi zvakare.
15:16 Nokuti kana vakafa vasingamutswi zvakare, zvino naKristu haana kumutswa zvakare.
15:17 Asi kana Kristu asina kumutswa, ipapo rutendo rwenyu harwuna maturo; nokuti imi ichiri muzvivi zvenyu.
15:18 ndokubva, wo, vaya vakafa muna Kristu ungadai.
15:19 Kana tine tariro muna Kristu nokuda kwoupenyu huno chete, zvino tiri kupfuura pasina kupfuura vanhu vose.
15:20 Asi ikozvino Kristu wakamutswa kuvakafa, sezvo nezvitsva vavavete.
15:21 For zvirokwazvo, rufu akasvika kuburikidza nomunhu. uye saka, kumuka kwevakafa kwakauya kuburikidza nomunhu
15:22 Uye sezvo vose muna Adhamu, saizvozvowo muna Kristu vose vachaitwa kuti upenyu,
15:23 asi mumwe nomumwe padzoro rake: Kristu, sezvo nezvitsva, uye inotevera, avo vari vaKristu, vakatenda veMubatanidzwa yake.
15:24 Pashure kuguma, kana achave mumaoko umambo kuna Mwari Baba, kana achave akadurura kwavabati vose, uye simba, uye simba.
15:25 Nokuti zvakakodzera kuti iye mambo, kusvikira akaisa vavengi vake vose pasi petsoka dzake.
15:26 Pakupedzisira, muvengi anonzi rufu vachaparadzwa. Nokuti zvinhu zvose pasi petsoka dzake. Uye kunyange anoti,
15:27 "Zvinhu zvose pazvinenge zvaiswa pasi pake,"Pasina mubvunzo akanga haibatanidzi uyo akaisa zvinhu zvose pasi pake.
15:28 Uye kana zvinhu zvose zvaiswa pasi pake, ipapo kunyange Mwanakomana pachake achaiswa pasi poUyo akaisa zvinhu zvose pasi pake, kuti Mwari agova zvose muna zvose.
15:29 zvimwe, chii zvichaita avo vari kubhabhatidzwa kuti vakafa, kana vakafa vasingamutswi zvakare zvachose? Sei zvino vari kubhabhatidzwa kuti vave?
15:30 Sei uyewo tiri kutsungirira miedzo ose awa?
15:31 Daily ndikafa, achishandisa kuzvirumbidza kwenyu, hama: iwe wandakabereka muna Kristu Jesu Ishe wedu.
15:32 kana, maererano nomunhu, Ini akarwa nezvikara paEfeso, sei kuti ini kubatsirwa, kana vakafa vasingamutswi zvakare? "Ngatidyei uye tinwe, nokuti mangwana tichafa. "
15:33 Regai nokutsauswa. kutaurirana zvakaipa inosvibisa tsika dzakanaka.
15:34 kusvinurira, iwe chete ndivo, uye regai kuva kuda kutadza. Nokuti vamwe vanhu vane kusaziva Mwari. Ndinotaura izvi kwamuri noruremekedzo.
15:35 Asi mumwe munhu angati, "Ko vakafa vanomutswa zvakare?"kana, "Nomuviri worudzii ivo vanodzokera?"
15:36 Kupusa! Chaunodyara hazvigoni kuupenyu, kana kutanga anofa.
15:37 Uye chaunodyara haisi muviri kuti uchava ramangwana, asi usina tsanga, akadai yegorosi, kana yezvimwe.
15:38 Nokuti Mwari anoipa muviri sezvaanoda, uye maererano muviri kwakakodzera mbeu mumwe nomumwe.
15:39 Nyama yose ndiro nyama. Asi mumwe zvirokwazvo nevanhu, mumwe zvechokwadi yemhuka, imwe iri yeshiri, uye umwe hove.
15:40 wo, kune miviri yokudenga, nemiviri yepanyika. Asi apo munhu, zvechokwadi, ane kubwinya denga, mumwe ane kubwinya pasi.
15:41 Mumwe ane kupenya kwezuva, umwe nokupenya mwedzi, uye mumwe nokupenya nyeredzi. Nokuti kunyange nyeredzi inosiyana wakachena.
15:42 Saka zviri pamwechete kumuka kwevakafa. Chiya chinodyarwa chiri uori uchasimuka kusaora.
15:43 Chii Unodyarwa mukuzvidzwa uchasimuka kukudzwa. Chii kunodzvarwa muutera uchasimuka simba.
15:44 Chiya chinodyarwa ane muviri mhuka vachamuka aine muviri womudzimu. Kana paine chiri muviri mhuka, kunewo womudzimu mumwe.
15:45 Sokunyorwa zvakanyorwa kuti munhu wokutanga, Adam, yakaitwa aine mweya mupenyu, saizvozvo Adhamu wokupedzisira kuitwa nemweya kuupenyu.
15:46 Saka chii, pakutanga, kwete pakunamata, asi mhuka, anotevera anova zvokunamata.
15:47 Murume wokutanga, kuva yepasi, akanga ari pasi; murume wechipiri, kuva vokudenga, uchava kudenga.
15:48 Zvinhu zvakadai vakafanana pasi vari yepasi; uye zvinhu zvakadai vakafanana matenga vokudenga.
15:49 uye saka, sezvo tine akatakura mufananidzo zvenyika, ngatiregei zvakare kutakura mufananidzo zvinhu zvokudenga.
15:50 Ndinoreva izvi, hama, nekuti nyama neropa haisi kukwanisa nhaka umambo hwaMwari; kana pane uori nhaka zvinhu incorrupt.
15:51 tarirai, Ndinokutaurirai chakavanzika. zvechokwadi, tose amukezve, asi isu hachifaniri zvose kushandurwa:
15:52 nechinguvana, ari kweziso, nehwamanda yokupedzisira. Nokuti hwamanda icharira, uye vakafa achasimuka, isingaori. Uye isu anofanira kushandurwa.
15:53 saka, zvakafanira kuti corruptibility ichi kuti akapfeka yekusaora, uye nokuda kwevanhu ichi kuti kusafa.
15:54 Uye kana kufa ichi yave kusafa, ipapo shoko rakanyorwa anofanira kuitika: "Rufu rwakamedzwa nokukunda."
15:55 "O rufu, ndiko kukunda kwako? O rufu, kukunda kwako kuripiko?"
15:56 Zvino rumborera rwerufu chivi, uye simba rechivi ndiwo murayiro.
15:57 Asi Mwari ngaavongwe, uyo akatipa kukunda kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu.
15:58 uye saka, hama dzangu dzinodiwa, kuva vakasimba uye vasingazununguki, musingazungunuswi, muchigara muchiwedzerwa pabasa raIshe, muchiziva kuti basa renyu harisi pasina munaShe.
16:1 Zvino pamusoro akaunganidzwa vakaitwa vatsvene: sezvandakachengeta akaronga kereke dzeGaratia, saka ko kuitwa nemi.
16:2 Nomusi wokutanga wevhiki, Sabata, mumwe nomumwe wenyu kubva pachake, yokutsaura chii chichava zvakanaka-zvinomufadza, kuti pandinosvika, ari kuunganidza kurege kuva akaita ipapo.
16:3 Uye kana ndiripo, wamunokangamwira munofanira kufarira kuburikidza netsamba, ndichavatuma kutakura zvipo zvenyu kuJerusarema.
16:4 Uye kana zvichikodzera kuti ini ndiendewo zvakare, vachaenda neni.
16:5 Zvino ndichaita akushanyire shure ndagura neMakedhonia. Nokuti ndichaita neMakedhonia.
16:6 Uye zvichida ndichagara nemi, uye kunyange kupedza chando, kuti nditungamirirei parwendo rwangu, pose ndabva.
16:7 Nokuti handisi kuda kukuonai ikozvino chete kupfuura, kubva Ndinovimba kuti ndirege kuramba ndinemi kwenguva yakareba nguva, kana Ishe akatendera.
16:8 Asi ini ndinofanira kuramba paEfeso, kunyange kusvikira paPendekosti.
16:9 Nokuti musuo, kukuru uye sarambidzika, yakashamisa kwandiri, uyewo vazhinji vanondipikisa.
16:10 Zvino kana Timotio anosvika, ona kuti ave pakati penyu pasina kutya. Nokuti ari kuita basa raJehovha, sezvandinoita neniwo.
16:11 saka, ngakurege kuva nomunhu unomuzvidza. pachinzvimbo, kutungamirira parwendo rwake norugare, kuti vauye kwandiri. Ndiri kumirira naye nehama.
16:12 Asi komunin'ina wedu, Apollo, Ndiri achiita munoziva kuti ini vakateterera naye zvikuru kuenda kwamuri pamwe nehama, uye zvakajeka zvakanga zvisiri kuda kwake kuenda panguva ino. Asi iye achasvika apo pane inosvika nguva kwaari.
16:13 kusvinurira. Mira nokutenda. Kuita manfully uye musimbiswe.
16:14 Regai zvose zviri zvako Kunyudzwa nerudo.
16:15 Uye Ndinokukumbirai, hama: Munoziva imba Sitefana, uye Fortunatus, uye Achaicus, kuti ivo zvezvitsva muAkaya, uye kuti ivo vakazvitsaurira kuna kushumira vatsvene.
16:16 Saka unofanira kuva pasi kuti vanhu vakadai, uyewo zvose vari kushanda uye kushanda navo.
16:17 Zvino ndinofara pamberi Sitefana uye Fortunatus uye Achaicus, nekuti zvakanga kushayikwa mamuri, ivo akapa.
16:18 Nokuti vakazorodza mweya wangu uye neyenyuwo. saka, kuziva vanhu vakadai.
16:19 Kereke dzapaAsia dzinokukwazisai. Akwira naPrisira vanokukwazisai zvikuru muna Ishe, nechechi weimba yavo, apo neniwo ndiri mueni.
16:20 Hama dzose dzinokukwazisai. Kwazisai nokutsvoda kutsvene mumwe.
16:21 Iri kwaziso kubva rwangu, Paul.
16:22 Kana munhu asingadi Ishe wedu Jesu Kristu, ngaave rushambwa! Maran Atha.
16:23 Nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu ngadzive nemi mose.
16:24 rudo wangu mose muna Kristu Jesu. Amen.